चिहान खन्ने झाक्रीको थानमा थुक्ने मान्छे को हो ? झाक्रीलाइ कसको षड्यन्त्र हो ? हेर्नुस डरलाग्दो रहस्य (भिडियो सहित) - नेपाली खोज
चिहान खन्ने झाक्रीको थानमा थुक्ने मान्छे को हो ? झाक्रीलाइ कसको षड्यन्त्र हो ? हेर्नुस डरलाग्दो रहस्य (भिडियो सहित)
चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएका जीवन राईको चिहान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको 12 बजे चिहान खनेर हेर्दा कसैले नसोचेको दृश्य देखिएपछी सबै गाउलेहरुले धामीलाई माफी मागेर सम्मान समेत गरेका छन । झाक्रीको चिहानमा आएर एक युवाले थुकेपछि देउता रिसाएर नासोचीको भएको छ, भीडियोमा हेर्नुहोला ।
गायक दिपेन्द्र बुढाकेशरीको आवाजमा “नक्कली” भिडियो सहित